အွန်လိုင်းကနေ မြန်မာ့အောင်ဘာလေ ထီလက်မှတ်များကို တိုက်နိုင်သော Myanmar E-lottery | မြတ်ပုလဲဖြူ
မေတ္တာရေစက် ဖြန်းခါဆင့်မှ လန်းခါဝင့်မယ့် ပန်းပွင့် ပုလဲဖြူ ...
အွန်လိုင်းကနေ မြန်မာ့အောင်ဘာလေ ထီလက်မှတ်များကို တိုက်နိုင်သော Myanmar E-lottery
အွန်လိုင်းကနေ မြန်မာ့အောင်ဘာလေ ထီလက်မှတ်များကို တိုက်နိုင်သော
Myanmar E-lottery ဆိုဒ် သို့ သွားရောက်ကာ သိန်းဆုများကိုစစ်ကြည့်ရအောင်နော်..။
Posted by မြတ်ပုလဲဖြူ at Monday, March 28, 2011
Google Chrome browser မှာ zawgyi font ထည့်နည်း
Step 1: Open the 'Fonts and Languages' window Click on the Spanner menu icon at the top right, as shown in Fig 1, or press Shi...
အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် အဝေးပြေး ကားလက်မှတ် ဝယ်မလား
အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် အဝေးပြေး ကားလက်မှတ် ဝယ်ယူနိုင်သည့် ဝက်ဘ်ဆိုက် (easyticket.asia) ပေါ်ထွန်းလာပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ http://www.easyticket.asia...
လိပ်ခေါင်းရောဂါသည် ၀မ်းချုပ်နေစဉ် အရွယ်အစားကြီးမားပြီး မာကျောသည့် မစင်ကိုစွန့်သည့်အခါ စအိုဝကို လိုသည်ထက်ပို၍ ကျယ်စေခြင်း၊ အလေးမသည့်အခါ စအ...
ချောင်းဆိုး ကင်းစင် ပြုံးပျော်ရွှင် ....
ချောင်းဆိုး ကင်းစင် ပြုံးပျော်ရွှင် ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်တွေ့လို့ ကိုနီဒင်းဆေးကြော်ငြာလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ ပြတိုက်က သူငယ်ချင်းတို့ရေ .. ..အခုတလေ...
မြတ်ပုလဲဖြူတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့  နေ့စဉ်ဘုရားရှိခိုးအပြီးမှာ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်လေ့ရှိကြတဲ့ အစွမ်းထက်ဂါထာတော်များ ရှိပါတယ်.. ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ...
ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို HIV ပိုး ဝင်ရောက်ခံရသူတွေရဲ့ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ တစ်လမှ နှစ်လအတွင်းAcute retroviral syndrome လို့ခေါ်တဲ့ တု...
အသည်းရောင်အသားဝါစီရောဂါ (Hepatitis C Infection)
အသည်းရောင် စီ ရောဂါ ဟာလည်း အသည်းရောင် ဘီ ရောဂါ နည်းတူ ကူးစက်မှု များနေဆဲ ရောဂါ တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်.. အသည်းရောင် စီပိုး ကို ၁၉၇၀ ခုနှစ် က ...
ဝိနည်း ၁။ ပါရာဇိကဏ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် ၂။ A_ပါစိတ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် B_ပါစိတ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် ၃။ မဟာဝဂ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် ၄။ စူဠ...
Beauty tips for all (အလှအပရေးရာ)
ကိုယ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ် လာတဲ့အခါ..နဲ့ မျက်ကွင်း ညိုခြင်းကို ပျောက်ကင်းအောင်၊ ကျန်းမာသော ဆံကေသာ၊ မျက်နှာပြင်ကိုမပျက်စီးရအောင် ဂရုစိုက်ခြင...
“ပင်ပန်း လိုက် တာ ဆရာရယ်၊ကျွန်မ အိပ်ရေး လည်း ၀ပါတယ်။ အစားလည်း မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်း နုံးချိ နေတာပဲ။ အလုပ် မှာ လည်း ထူးပြီး မပင်ပန်...
Blogger (10) Computer (9) Dahama (21) Double Crane (1) Download (1) Ebook (6) Essay (6) Favourite (9) Gardars (1) Health (19) Internet (18) Knowledge (37) Learning English (4) Mobile (4) Poem (6) Story (2)
Bye Bye, See U Later !
Blog Archive August (1) March (1) December (2) November (8) October (7) July (14) June (7) May (10) March (1) February (1) January (5) November (1) March (17) February (20) January (17) November (11) August (2)
ငါတတ်ငါတော် ငါအကျော်ဟု၊ ငါသော်စိတ်ထား မရှိငြားလည်း၊ ငါကားငယ်ရွယ် ဥာဏ်မကြွယ်၍၊ အဘယ်သို့လျှင် အမှားစင်အံ့၊ အကြင်သူတော် ပညာကျော်သည်၊ ချွတ်ချော်လွဲမှား ငါ့စကားကို၊ စိတ်ထားဖွေးဖြူ ပြင်တော်မူ။ (ရှင်အဂ္ဂဥာဏ) ဆုံဆည်းရာ မှာလည်း ဆုံတွေ့နိုင်ပါတယ်..။ https://www.facebook.com/meeting2gt
Hello there ! I'm rather new to blogging & collecting favorite posts.* (Mai Occupation :*Teaching Internet, Basic Computer & Web Design & then working in MIT*) > I'm 40% friendly > 30% geek > 20% crazy > 10% emo. *What u see may not be what u get* (: Feel free to add me asafriend. BB, CUL ....
© 2011 မြတ်ပုလဲဖြူ | Designs by Web2feel & iPad2Sleeve